SIYAASADDA | georgedixonprimary
Ujeedadayadu waxay tahay in manhajkayagu yahay, caruurtu waxay noqon doonaan kuwo fikrado qotodheer, barayaasha xiisaha leh iyo muwaadiniinta daryeela.
Si loo gaaro himiladaas, waxaan dhisay manhaj dugsi oo ay ku jiraan, oo ku salaysan, Manhajka Qaranka. Shaqaaluhu waxay si wada jir ah u wada shaqeynayeen si ay u abuuraan manhaj midaysan oo ku salaysan si ay carruurta u helaan xirfadaha, aqoonta iyo fahamka si ay ugu koraan xubnaha mas'uulka ka ah bulshada iyo muwaadiniinta dalkeena.
Waxaan manhajkayaga ku dhisnay afar darawaladood:
siinta carruurta waayo-aragnimo nololeed dhab ah, si markaa barashada had iyo goor ay macno u leedahay oo had iyo goor ujeedo leedahay
ku dhiirigelinta carruurta inay dareenkooda wax ku qoraan, bulsho ahaanba ogyihiin oo tixgeliyaan baahida jireed iyo dareenka ee dadka kale iyo naftooda
abuurista isku-xiriiriye u dhexeeya mawduucyada iyo mawduucyada aynu baran karno iyo adduunka ka baxsan albaabada dugsiga
Fikirka Halista ah
inay awood u siiyaan carruurta inay si qoto dheer u qiimeyaan oo qiimeeyaan macluumaadka
Carruurta iyo qoysaska waxay ka yimaadaan George Dixon oo ka socda adduunka oo dhan, iyo marka ay naga tagaan waxay fahmi doonaan Ingiriiska, kuwaas oo aanu nahay adduunkeena. Waxay sidoo kale yeelan doonaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah akhriska, qorista, xisaabta iyo sayniska si ay ugu suura geli karaan horumarka dugsiga sare. Waxaan caruurta ku tirtirnaa qiimaha asaasiga ah ee daryeelka, ballanqaadka, isgaadhsiinta, iskaashiga, geesinimada, ixtiraamka iyo tixgelinta - iyaga oo rajeynaya in ay noqon doonaan muwaadiniin sharaf leh; diyaar u ah inuu mustaqbal wanaagsan ku yeesho.
Carruurta waxaa la qiimeeyaa nus bil kasta iyo macalimiintuna waxay isticmaalaan qiimeyntan si ay uqayb galaan casharradooda ayna u hubiyaan in carruurtu ay horumar sameeyaan inta ay nala joogaan. Manhajka laftiisa ayaa la qiimeeyaa sannad kasta, shaqaalaha ayaa qiimeynaya oo dib u eegaya qorsheynta si loo hubiyo in ay marwalba firfircoon tahay, wax tar u leedahay iyo ka caawinta caruurtu inay horumar sameeyaan, sida bartaha iyo sidoo kale muwaadiniinta adduunka.
Wixi warar dheeraad ah oo ku saabsan koox sanadle ah, fadlan riix tabarka ku habboon, ama u diyaari inaad la hadasho macalinka fasalka ilmahaaga.